မီးလောင်မှုသတင်း Archives - Page5of 146 - Myanmar Fire Services Department
ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့၊ ဖါရ်ထောက်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Jan 13, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၁၂.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၄ ၁၀ အချိန်ခန့်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့၊ ဖါရ်ထောက်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနေ ပိုင်ရှင် ဒေါ်မန်းလှယ်ဇိန်း၏ (၄၀x၃၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း(၂)ထပ် နေအိမ်တွင် လျှပ်စစ်အပူပေး ကိရိယာ (Heater)အား အသုံးပြုပြီး မီးခလုတ်မပိတ်ဘဲထားခဲ့ရာမှ အပူလွန်ကဲပြီး...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ အမှတ်(၄၇၈)ရှိ My Lotus (စားသော� ....
editor | Jan 12, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၁၁.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၁ ၀၂ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ အမှတ်(၄၇၈)၊ ပိုင်ရှင် ဦးသူရိန်အောင်၏ My Lotus(စားသောက်ဆိုင်)အကျယ်အဝန်း(၆၀x၉၀)ပေ၊ Steel Structure (၂)ထပ်ရှိ မြေညီထပ်(၅x၈)ပေ လျှပ်စစ်မိန်းခံရှိ...
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရွှေစက်ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၈) နေအိမ် မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Jan 11, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၁၀.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၉ ၃၃ အချိန်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရွှေစက်ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၈)နေ ပိုင်ရှင် ဦးတီးတီး၏ (၃၀x၂၀) ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ မြေစိုက်နေအိမ်တွင် သွယ်တန်းထားသော ဝါယာကြိုးများ အပူလွန်ကဲပြီး မီးစတင်လောင်ကြောင်း ၀၉၃၄ အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့်...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တန့်ဆည်မြို့၊ မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် လူနေဆိုင်ခန်းမီးလောင်မှုသတင်း
၁၀.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၀ ၁၅ အချိန်ခန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တန့်ဆည်မြို့၊ မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက်နေ ပိုင်ရှင် ဦးစောလွင်၏ (၄၀x၃၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ အုတ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း (၂)ထပ် “မေရီချို” လူသုံးကုန်နှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်တွင် ကားဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ ရေမော်တာ မိန်းခလုတ်မပိတ်မိရာမှ...
မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကညှော်ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမီးလောင်မှုသတင်း
၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၃ ၁၀ အချိန်ခန့်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကညှော်ကျေးရွာတွင် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဝံသ ၏ (၂၀x၃၀)ပေ၊ ရှေးဟောင်း အုတ်စီ (၂)ထပ် ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်ရှိ ပထမထပ်တွင် အဲယားကွန်း Safe Guard အပူလွန်ကဲရာမှ မီးစတင်လောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း ၁၃ ၂၀...
House fire in Tanintharyi township, Tanintharyi region
editor | Jan 9, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
On 8 January, at about 10 00, fire occurred at the two storey house ( 36’x18) located at the Singaung village, Thakyat village tract, Tanintharyi township, Tanintharyi region. It was investigated that the fire started from the over heated solar power system put...
Page5of 146« « Previous...34567...102030...Next »